साउदीका हरेक पत्रपत्रिकामा नुरको आ`त्मह त्याको खबरले म आश्चर्यमा परेँ म अफिस भित्रैको एउटा क्याबिनमा कम्युटरमा ब्यस्त रहन्थे । तर अचान`क पत्रिकामा परेको मेराे नजरले अचम्मै बनायो । हुन त मलाइ पनि कहाँ अरबी पढ्न आउथ्यो र राजको मोबाइलमा देखेको फोटोको कारण`ले चिनेको मात्रै हो ।
उनले दिएको यती मायानै मेरो जिन्दगीको पुर्ण खुसी बन्नेछ । हेरौ जे लेखेको छ यो भाग्यमा त्यही हुन्छ । मलाइ यही म`र्न लेखेको छ भने म पराइकै माटोमा मरौ`ला ।हो मलाइ मेरो स्वच्छ पशुपतीमा ठाँउ नमिल्ला, बाग्मतीको पानीले चोखीन नपाइएला,चन्दनसँगै जल्न नपाइएला तर मायामा दिएको ज्या`न कहाँ खेर जान्छ र ? बिशाल, हुन त म अभागी ठहरीनेछु, बिदेशको माटोमा पुरीँदा तर पनि माया भनेको माया हो । नेपाल रहँदासम्म कोही कसैमा आँखा नपरे पनि यहाँ उनीमा आँखा पर्नु मेरो भाग्यको खेल हो बिशाल, जे होगा देखा जायगा । नुर र राजको प्रेम देखेर मलाइ पनि डाहा हुन्थ्यो । मलाई पनि प्रेममा डुब्न मन लाग्थ्यो । मरूभूमिमा राप भित्र पनि राजको चमकता र मुस्कानले म सँधै प्रफुल्ल हुन्थे । उनिहरुको प्रेम झाँगिदै थियो ।
कहिले भेटेर त कहिले फोनबाट नै लामो समयसम्म उनिहरुको कुराकानी चल्थ्यो । म कहिले काँही जिस्काउथेँ “राज तेरो त काम तमाम भो, भाउजुसँग मलाइ नि कुरा गरान त यार । म पनि यसो सुनौ मेरी भाउजुको स्वर जुन स्वरमा राज अल्झिएको छ । मेरो कुरा सुनेपछी राजले फोन लाउड स्पिकरमा राखेर सुनाउथ्यो ,उताबाट आवाज आउथ्यो “ मिन हुवाको, राजले नरम भएर जवाफ दिन्थ्योस्“सदीग”साथी ”िबशाल । उनीहरुको कुरा कती खेर सकिन्थ्यो मैलै कहिले पनि थाहा पाइन ।
म आफ्नै दुनियामा ब्यस्त हुन्थे, उनीहरु आफै भित्र हराउथे । एक कान दुइ कान मैदान । उनीहरुको प्रेम नुरको घरपरिवारले थाहा पाए । उनका बाबा आमाले पु`लीसमा कम्प्लेन गरे । ठुलो रडाकोनै मच्चियो ।अन्त्यमा राजलाइ फाँ`सी सुनाइयो ।
राजको पत्र लिएर म राजसँग अब अन्तिम पटक भेटेर फर्किदै छु भन्ने थाहा हुँदा मेरो मुटुले ठाँउ छाडी रहेको थियो ।मैले भगवानलाई लाख बिन्ती गरेँ तर पनि भगवानले राजलाई ब`चाउला जस्तो लागेन । म मन कठोर बनाउदै गाडीसम्म आँए र आफ्नो गाडी स्टार्ट गरेर अपार्टसम्म आँए । मैले हतार हतार राजको पत्र खोँले अनी पढ्न थाँले ।‘मेरी नुर जुनी जुनी जिउनु ल । तिमी त अन्तिम पटक भेट्न पनि आइनौ । तर पनि मलाइ दुख मन छैन । किनकी म तिमी जन्मेको माटोमा हाम्रो माया बिसर्जन गर्दैछु।
तिमीलाइ थाहा छ नुर मेरो घर पहाडमा छ । प्रकृतीको धनी मेरो गाँउ छहरा,पहरा,लहराल े भरीपुर्ण छ । तिमीलाइ थाहानै छ होला । पढेकी पनि हौली, म त सगरमाथाको देशको मान्छे ।तिमीलाइ सगरमाथा घुमाउने रहर त रहरै भयो नुर । तर पनि मेरो ठम्याइ छ ।त्याँहाको प्राकृतीक सौन्दर्यहरु तिमीलाइ देखेर मोहित हुने थिए ।कोइलीले आफ्नो स्वर निकाल्नु पहिले तिम्रो स्वर सुन्न चाहन्थ्यो । अनी म तिम्रा हात समाएर सबैको सामु भन्थे।
धर्म फरक भएकै कारणले म जस्ता कती मेरा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी हरु यहाँ हेपीएको चेपीएको तितो यथार्थ छ ।मान्छे आखीर मान्छे हो नी नुर, जात,धर्म, स्तर त हामीले बनाएकै त हो । तिमी नै भनत जन्मनु भन्दा अगाडी तिमी कुन धर्मको थियौ ।काटे रगत त रातै आउछ नी हैन र नुर ? कि हिन्दु को रगत रातो अनी मुश्लिम,क्श्चीयनको सेतो,हरियो हुन्छ की हिन्दुको हरियो सेतो रगत हुन्छ ? तिम्रो बाबालाइ सोध है । हुन त तिम्रो बाबालाइ प्रेमको महत्व के थाहा ? सँधै पैसाकै पछाडी कुद्छन् ।पैसा दिएर धर्म परिवर्तन गर भन्छन् । पैसाले माया पाइने भए संसारमा सबै पैसावालहरुपुर्ण हुन्थे ।
उपहार दिँदैमा,कुनै एक बिशेष दिनमा माया जाहेर गरेर माया गरेको भन्ने सोच्ने तिम्रो बाबालाइ माया गर्न सिकाउ नुर । तिमीलाई त माया गर्न आउछ नी है ! तिमी सँग भेट हुने यही अन्तीम हो । त्यसैले मलाइ यो पत्र टुङ्ग्याउन मन छैनअनी चाहन्न पनि तर पनि लामो गन्थनमा फस्दा लेख्दा लेख्दै अन्त्यमा तिमीसँग बिदा माग्न पनि नपाइएला की झै लाग्छ । त्यसैले हाम्रो भेट अब सक्नु पर्छ मैले । यो बेग रोक्नु पर्छ मैले जुन बेगमा म भावना पोखी रहेछु।
म मेरो जिन्दगी अब अरुको नाम कसरी गरौ बिशाल बाबु मेरा आमा बाबा चाहनु हुन्छ म अरु कसै सँगबिबाह गरौ ।तर राजलाइ सुम्पियको यो तन मन कसरी म जिउदै म`रेर अरुलाइ सुम्पिदै राजको मायालाइ अपहेलना गरौ ।त्यसैले मैले आ`त्मह त्या गर्ने निर्णय गरेँ । मैले गल्ती त गरीन नी है बिशाल बाबु बिशाल बाबु मैले हजुरलाइ नदेखे पनि हजुरको बारेमा राजको ओठ बाट सबै सुनेको छु ।
त्यसैले हजुरले निर्दोष ठान्नु भयो भने म राजलाइ उगएको ठाँउमा गएर मेरो मायाको सर्जिम बक्ने हजुरलाइ देखाउनसक्नेछु ।मलाइ माफ गर्नुस् ल बिशाल बाबु । उही हजुरको हुन नसेकी,हजुरले फोनमा जिस्काउने,हजुरकी भाउजु ‘नुर’ – खसोखास केही समय अघि प्रकाशित भएको यो कथा र तस्बिरलाई हामीले लिएका हौं ।
२०७८ असार ९, बुधबार २३:१६ गते0Minutes 861 Views